बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले घुस लिएको पुष्टि भएको छ । कोइरालाले घुस लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौनियारविरुद्ध एक करोड २८ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । होस्टल र फार्मेसी भवन निर्माण गर्दा ठेकदारसँग पटक–पटक गरी एक करोड २८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएकाले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । रौनियारले होस्टल र फार्मेसी… पुरा पढौ
कोराला नाका खोल्न गण्डकी प्रदेश र चिनियाँ प्रतिनिधिको बैठक
मुस्ताङको कोराला नाका खोल्ने विषयलाई लिएर आइतबार पोखरामा गण्डकी प्रदेश र चिनियाँ प्रतिनिधिबीच छलफल शुरु भएको छ । प्राध्यपाक वाइ ड्यूङ लिउको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ टोलीले कोराला नाका खोल्न संभावाना र प्रदेश सरकारको धारणाबारे भेटमा जिज्ञासा राखेका छन् । नाका खुलेपछि हुने आर्थिक र धार्मिक गतिविधि बृद्धिको संभावनाको बारेमा समेत टोलीले चासो राखेका छ । जवाफमा प्रदेश प्रतिनिधि मण्डलका नेतृत्व गरेका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री राम शरण बस्नेतले नाका खोल्न प्रदेश… पुरा पढौ
१७ जना निष्काशनपछि विप्लव समूहको नयाँ केन्द्रीय समिति गठन (सदस्यहरूको नामावलीसहित)
प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि स्थायी समिति र पोलिटब्युरो भंग गरिएको छ । अन्य १७ जना केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारीमुक्त बनाइएको छ । एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठ्न थालेपछि विप्लव स्वयम्ले स्थायी र पोलिटब्युरो भंग गरेका हुन् । १७ जना केन्द्रीय नेतालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै खुला मोर्चामा पठाउने निर्णय गरिएको जिम्मेवारीबाटै हटाइएका एक नेताले बताए । एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्र… पुरा पढौ
रवीन्द्रको क्षेत्र (कास्की २) मा कांग्रेसबाट को ?
निर्वाचन आयोगले देशभर विभिन्न कारणले रिक्त भएका स्थानमा निर्वाचनको तयारी गरेको छ । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी फागुन १५ गते निधन भएको थियो । देशैभरका रिक्त स्थानमा मंसिर १४ गते उपचुनाव गर्ने तयारी भएको छ । अधिकारी निर्वाचित भएको कास्की २ मा पनि मंसिर १४ गते चुनाव हुनेछ । मिति तोकिएसँगै यहाँ को उठ्लान् भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । नेकपाबाट… पुरा पढौ
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पाँच महिने अभियान सुरु गरेको बताएको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियान सुरु भएको जानकारी दिएका छन । प्रवक्ता प्रकाण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै असारदेखि कात्तिकसम्म सञ्चालन हुने आर्थिक अभियानमा सहयोग गर्न आम जनसमुदायमा अपिल समेत गरेका छन । प्रवक्ता प्रकाण्डले आर्थिक सहयोग अभियानमा पार्टीबाट कारबाहीमा परेका र भगौडाहरुसँग सचेत रहन अपिल गरेका छन । उनले ने.क.पा.ले आगामि कार्तिकसम्म… पुरा पढौ
मुलुकभर दूध अभाव, यस्तो छ कारण
डेरी उद्योगहरुले उत्पादनमा ३० प्रतिशतले कटौती गरेकाले मुलुकभर मागअनुसार दूध आपूर्ति हुन सकेको छैन । दूध कम उत्पादन हुने (लिन) सिजनको मध्य समय पर्नु र भारतबाट स्कीम मिल्क पाउडर (एसएमपी) आयात बन्द हुँदा उद्योगमा दूध अभाव भएको हो । दूध आपूर्ति कम हुँदा काभ्रेको पनौतिस्थित अनमोल डेरी बन्द भएको छ भने भक्तपुरको नेभा डेरीले शनिबार बजारमा दूध नै पठाउन नसकेको जनाकएको छ । ‘एसएमपी छैन, झोल दूध पनि स्टकमा नहुने… पुरा पढौ
उपनिर्वाचनको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि तयारी शुरु गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोकिएलगतै उपनिर्वाचनको मिति थालिएको आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनपछि रिक्त रहेको पदमा एकै दिन उपनिर्वाचन गराउने गरी आयोगले तयारी थालेको प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन कार्य पनि आयोगले रोकेको छ । मतदाता नामावली ऐन,… पुरा पढौ
प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर प्रस्थान, कहिले फर्किन्छन् ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका छन् । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र निजी चिकित्सक डा. दिब्या सिंह सिंगापुर गएका हुन् । विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षित प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भ्रमण भएको बताए । प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सिङ्गापुरस्थित नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । आइतबारदेखि नै स्वास्थ्य परीक्षण… पुरा पढौ
आठ जुवाडे एकैखालमा पक्राउ
प्रहरीले नगदसहित आठ जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ । चितवन, रत्ननगर नगरपालिका–३ स्थित विद्युत् डाँडाका जितमान मोक्तानको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो । जुवा तास खेलिरहेको स्थानबाट नगद रु ४४ हजार ३७० र तीन बुक ताससमेत नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक एक नारायण कोइरालाले जानकारी दिए । पुरा पढौ
नेपालमा मनसुन सक्रिय भएसंगै आइतबारदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ । मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू–भाग भन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ । शनिबारबाट विस्तारै उत्तरतिर (नेपाल तर्फ) सर्दै आउनेक्रम शुरु भएकाले नेपालसम्म आइपुग्न अझै केही दिन लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । उक्त मनसुनी न्यून चापीय (वर्षा गराउने वायु) नेपालतर्फ सर्ने क्रम शुरु भएकाले सोमबारसम्ममा मनसुन पूर्ण सक्रिय हुने मौसमविद् समीर श्रेष्ठले बताए । उनले भने,… पुरा पढौ
Page 255 of 408« First«...102030...253254255256257...260270280...»Last »